Haad Iyo Habar Dugaag- Qore: Dr Shadheeye | SAHAN ONLINE
Haad Iyo Habar Dugaag- Qore: Dr Shadheeye
Sheekadu ma aha mid cusub ee umada kale ayaa laga soo min guuriyey waana mid ku habboon in carrurta Soomalida dhabta ah ee dalka ku nool loo gudbiyo oo looga sheekeeyo.
Haaddu sida Gogorka, Galayr, Baqalye , Beelyo, Dhuuryo(xuunsha madaw) coomaadi iyo Tuke way ka duwan yihiin nafleyda kale marka ay radsanayso risiqi rabbi u qoray oo iyado cirka meel aad uu saraysa duulaysa ayeey aragta Neefka bakhtiya ama inta ay ugaarsato sida bakayla, abeesada iyo wixi la mid ah. Nafleyda ugarsata oo dhami wax badan waxay ku hesha waayo aragnimo tusaale: sida wax loo ugarsado oo kale, taasi ayeeyna fac ka fac isu gubisa oo ubadkeeda ku barta sida wax loo dabto.
Dhanka kale habar dugag waxay baratay in meesha haaddu ku dul meeraysato ay wax la cuna ka heli karto.
Waagi hore haaddu markay bakhti aragto waxay u yeeri jirtay cidda habar dugaaga ugu dhaw sida dhurwaaga, dhidarka, haramcadka shabeelka iyo dawoc,taasi dhaawac ayeey haaddi u keentay oo waxay cunto iska daaye nafteed ayaa halis gashay oo ku sigatay in la cuno ,taasi waxay ka mid tahay habar dugaaga asluubteeda oo ah in wax kasta oo ka tabar yar la weeraro,la dilo oo la cuno .
Xilligaas waxi ka dameeyey haadu markay wax aragtu waxay u sheegi jirtay libaaxa keliya oo la yiri wuxuu leeyahay dhaqan ah marku dhergo in uu meshu neefka ku cunay agteeda fariisto oo seexdo. sidaas haaddi waxay si nabad gelya ah ku heshay sedki ay ku lahayd neefka libaaxu goobtaas ku cunay oo ya kaga magangashay habar dugaaggdi dhaqanka xumayd oo haaddi sababta u ahayd cuntaday cuneen holiyeey iyadana in ay cunaan.
Nasiib darro dhulki haadu ku noolayd waxa ka dhamaaday libaaxi,oo qaybi waa gabowdey oo habar dugaaggai kale dhegba jalaq uma siinayso(ka biqimayso) ,qaybna jirraa heshay oo waa dhinteen.libaaxu waa boqorki inta nool ee durjoogta ah oo dhan(kuwa hilibka cuna iyo kuwa kale) wuxuu leeyahay haybad ,xoog,hufnaan iyo cod gaar ah (cidiisa)oo sheeka xariirta carrurta lagu seexiyo waxaa lagu xusa in sebena hore dadka mooye nafleyda kale oo dhammi ay wada lahayd boqortooyo uu llibaaxu ka madax yahay,boqortoyadaas oo ahayd mid la wada nool yahay kuna dhisan habka shuurada guddoonkase waxaa laha libaaxa.
Haaddi waxaa soo foodsaaray xilli adag abaar ,cudur , gaajo dhimasho iyo wax la wadaaga habar dugaag dhaqan xun oo wax siini ha joogta in ay noolato loo diiday
Goor haaddi shirayso oo laga wada hadlayo sidi la isu badbaadin laha boqorkuna shirka guddoominayo(waa gorgorka oo lagu tilmaamo inta duusha in uu boqor u yahay taasna wuxu ku minaystay (xoogiisa,idhihiisa oo meel dheer wax ka arka isaga cirka sare dulaya, u dulqadashada gaajada iyo mudada uu dulimadka ku jiri karo oo badan) ayaa waxa soo dhacay haatuf wuxu soo sheegay in ay jireen qayb habar dugaag ah oo asalkoodi degaanka ka soo jeeda lakin meela kale ku nool kuwaasa oo abaar iyo colaadi waayo hore dhacay ka guureen degaanka iyagoo dulugle ah.
Haaddii waxay guddoonsatay in haddii libaax la waayey ay kuwaas degaanka muddo ka maqnaa u yeerato iyadoo kuwaas naruura bidaysa si xanuunka iyo dhibaatada hayasa uga baxdo ,laakiin haaddu waxay ilawday in habardugaaga libaax ka maqan yahay meel ay joogtoba isku mid tahay oo horror- nimada iyo wax la qaybsi xumida ay ka siman yihiin (ay dhaqan u tahay) ,waxaa inta si dheer in kuwa ay miciinka bidaysa oo ay u habar wacanaysa ay yihiin hanti dad leeyahay yihiin oo dhaqmo kale iyo dana kala duwan masilaan oo leh sifoyinka soo socda:
Wa habardugaag aan weligeed meel wax lagu dabto arkin.
Weligeed cid wax la qaybsan oo wax wada cunka aqoon.
Waxay ku jirtey meelo gaar ah oo cunto lagu siiyo ,ayna tahay habar dugaag doorsoomay oo meel loo raad raaco aan lahayn.
Mararka qarkood waxay leeyihiin dhaqanka dadka sida hunguri weynida, daacad darrida iyo wax is-daba maryeynta.
Waxaa ka muuqata busaarad iyo saboolnimo , wax kasta oo la siiyana ma aha kuwa dhergeya.
Haddii waxa la wada ugaarto in qayb meel lagu kaydsado taqaan(waa dhaqan aanay habardugaag horay u lahayn).
Waxay wadata dhallaan subaac ah oo socod qof saqdadan leh, haddaad sii daymoto waxaad moodaa in ay yihin dad ilaah dalagay oo habar dugaag u eg.
Dhallaan keeda qayb ka mid ah waxaa loo sameyey soodin gaar ah si nabadgelyada nafleyda kale loo dhawro.
Daabacaadda: Sahan Online